Xildhibaannada Golaha Shacabka oo maanta cod gelinaya kuraas…
Xildhibaannada Golaha Shacabka BFS ayaa maanta markale dood adag ka leh kuraas badalka mudanayaasha ee deegaan doorashadooda iyaga oo ka fogaanaya in ay waayaan ama looga adkaado Xubinnada Golaha.
Dood adag oo saacado qaadatay ayay shalay ka yeesheen Xidhibaannada Xeerkaan oo kamid ah afar qodob oo muhiim u ah doorashada dalka sida uu sheegay guddoonka golaha shacabka iyo guddiga doorashooyinka ee diyaariyay.
Golaha ayaa meel mariyay:
1-Xeerka kuraasta Haweenka oo ay u codeeyeen in kaliya xubnaha haweenka ah ee golaha ku jira kuraastooda kula tartami karaan Dumar.
2-Deegaan doorashada kuraasta Gobollada Waqooyi ee Xildhibaannada Golaha Shacabka iyo halka lagu qabanayo.
3-Kuraasta Matalaadda Gobolka Banaadir oo 13-xubnood laga siiyay Golaha Aqalka sare BFS kuwaa oo codka Gobolka ku fadhin doona Golahaas.
Waxaa dhiman oo ay maanta cod gelinayaan qodobkaan 4-aad oo ku saleysan kuraasta Xildhibaannada in ay ka badalan karaan deegaan doorashadooda.
4-Kuraas badalka Xildhibaannada Golaha Shacabka, iyada oo Xildhibaannada ay ka baqayaan in lagu qabso ama ay hanan waayaan.
Golaha waxaa 27-kii bishaan hortagay Guddiga Madaxa banaan ee Doorashooyinka Qaranka oo guddoomisada guddigaas kahor sheegtay in la siiyo bilooyin waqti ahaan ku idlaanaya bisha Agoosto 2021-ka oo 6-bilood dheeraad ku noqona xil heynta Xukumadda.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka BFS Xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka digay in kuraasta Xildhibaannada laga wareejiyo deegaan doorashadooda, sababtu waxa uu ku sheegay in Xildhibaanka waxa uu ka fakirayo ee ah in aan lagu qabsan ay ka dhalan karto mid ka weyn oo muran gelin karta deegaanka kursiga laga leeyahay.